Dargaggoo Dastaa Moosisaa jedhama har'a magaalaa Shaambuu irraa waraana mootummaan qabamee ukkaanfame Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDargaggoo Dastaa Moosisaa jedhama har’a magaalaa Shaambuu irraa waraana mootummaan qabamee ukkaanfame
By Yaya Beshir Kaleessa ibsa pirezdaantii MNT cuunfee dhiheesseen ture. Har’a hoo, san booda maaltu jira? Ibsa D/Tsiyoon sana booda hanga tokko haalli jiru tasgabbaaheera. Meeshaan waraanaa hangi tokkos naannicha keessaa fe’amee bahaa jira. Garuu ammas hojii qabeenyaa humna RIB achi jiru sossoosoon itti fufa. Kana irratti garuu walii galteen ifaan godhamee hin xumuramne. Wanni argaa jirru, D/Tsiyoon gam tokkoon nageenya naannichaaf jecha mootummaa federaalaa waliin hariiroo jiru sirreessuu yoo barbaadu, gama kaaniin ammoo dhiibbaa hogganoota TPLF biroo fi dargaggoota Tigraay gidduutti gamaa gamana daddaaqamaa jiraachuu dha. Ibsa isaa kaleessaa booda gariin didanii isattuu dhagaa darbachaa jiru. Gariin ammoo callisaniiru. Hogganoonni TPLF gurguddaan miira xiiqii fi jibbaan guutame qaban dargaggoota dhaalchisaniiru. Ummata keessa dhokatanii dargaggoota social media irratti gadhiisan fayyadamuun biyya gooluu barbaadu.
Mootummaan federaalaa waraanaa fi qabeenyaa waraanaa biyyattii kan heddumminaan naannoo sana keessa kuufamee jiru achii baasuu irratti hojii murteessaa hojjechaa jira. Hojii kanatti yoo milkaaweef rakkoo nageenyaa biyyattii mudachuu malu irra aana. Yoo gufachiifame garuu leenca ilkaan irraa daakame taha. Carraan gufachuus tahee irra aanuu garuu hanga ammaatti hin qulqulloofne. TPLF harka kennachuu diddee kan hanga ammaatti mataa raaftuuf waraana naannoo sana keessa jiru irratti aangoon m/federaalaa qabu gaaffii keessa waan tureefi. Waraana san jallifnee faallaa mootummaa federaalaa dhaabna, yoo sun dides akka yaadaan wal facaasu goona, yoo sanatti milkaahuu dhabne ammoo xiqqaatullee meeshaalee waraanaa sababa tika daangaaf jecha achi kuufaman boojinee harkatti galfanna kan jedhu. Meeshaa sana harkatti galfannaan ammoo waan fedhan raawa’chuuf carraa bal’ifatu. Herregni isaanii kun akka hin milkoofne hojiin hojjetamaa jiru jabaatee akka itti fufu hawwina.
#Gaaromaa_Jalduu_Ayyaanaa jedhama Godina wallagga Bahaa Aanaa Haroo Limmuutti Dhalate amma kan jiru magaalaa naqamtee ganda 05 keessadha hojiin isaa konkolaachisaadha kanaan dura sabboonaa fi qabsaa’aa oromooti sana sababeeffatanii Ati ABO dha jechuudhaan bara 1999 Utuu inni konkolaataa mootummaa konkolaachisuu ergamtoota Tplf n qabamee waggaa 8f baatii 4 qaallittiitti dararamaa ture bara 2008 ji’a fulbaanaa ba’e erga achii ba’ees karaa gara garaatiin ajjeesuuf yaalii guddaa gochaa turaniiru. gaafa guyyaa jechuun mudde 29-4-2011 ganama sa’a 12:00 irratti butamee bakka inni jirus hanga hardhaatti waanti adda bahe hin jiru.
Motummaa waayyaane biyyaa 52 biyyoota Africa irraati ijjaree ABO ABO DHABAMSIISU HIN DANDENYEE Dabni ABO irratti qindeeffamu kamuu hin milkaa’u!!
Shira Dammaqaa Nagaasaa fi Hayiluu Gonfaan Qindeeffamee, Geetuu Daandessaan deemaa jiru!
Akkas ture, ergama diinaa qabatanii ummata Oromoo magaalaa Amboo diiguu fi wal dura dhaabbachiisuuf akeekkatamee shirri qophaa’eera.
Hayiluu Gonfaa erga ABO irraa ganee booda Kamaal waliin “Jijjiirama” jechuun qabsoo Oromoo dadhabsiisaa ture. Booda Kamaal waliin wal dhabee, Abbaa Nagaa fi Nuuroo daddafoo waliin dhaaba maqaa ABO tokkoomeetiin bixxilan.Erga biyya galanii ABO irratti duula guddaa gaggeessaa turan,jirus. WBO giddu gala jiru akka hidhannoo hiikkatu irratti baay’ee hojjete.Aangoon inni OPDO irraa argate ammatti ifa miti.Garuu qaama Nageenyaa keessaa akka hojjetu mul’ataa jira. Tibba darbe nama Abdiisaa Ifaa jedhamu, ona Abuunaa Gindabaratitti meeshaa hidhannoo guutuun, waardiyyaa hidhannoo guutuun ergee ummata sodaachisaa turan.Booda sakattaa WBOf gara gammoojjiitti bobbaase.Namni Abdiisaa jedhamu kun caasaa hedduu qunnama.Hayiluun yeroo hedduu mallaqaa gudda itti akka kennus bira gahameera.
Dammaqaan ABO irraa ganee magaalaa Asmaraatti UNtti harka Kenne.Booda alatti bahe.Dhihoo gaafa biyya galu Aktiivistoota biroo waliin lafti qotee bulaa Oromoo irraa buqqifame, kaaree 1,000 kennameef. Dammaqaan nama daldalaa, horiif bololaa jiru ta’uu hubatameera. Ji’oota muraasaa as Hayiluu waliin walii galtee ABO giddugala Oromiyaa keessatti dadhsbsiisuu ejjennoo jedhu kan harki mootummaa keessa jiru irratti wal hubannoota irra gahan.
Hojii kanaafis maallaqa guddaa mootummaan akka isaan gargaaru waadaa galeef.Shirri kun kan irraa eegalamu magaalaa Amboo kan jedhu waliif galan.Dirqama kana akka mataatti kan qindeessu Dammaqaadha.Golgaan hojii kanaaf tolfame akka inni hojii dhuunfaa Investimetii fakkeessuu fi misooma magaalaa Amboo jechuun socho’uudha. Namni kan biroo isaan gargaaru hedduudha.Namootni hojii kana akka isaan gargaaraniif keewwatan diyaaspooraan hedduudha.Achi keessaa nama ” Fiixaa Mootii” Jedhamudha.Kun bira gahameera.Hojii shiraa ABO magaalaa Amboo keessatti dadhabsiisuu kun erga eegaalamee torbee sadi ta’eera. Dammaqaanis yeroo sadi Ambootti deddeebi’ee namoota muffii ABO irraa qaban hooteelotatti dubbisuun akka isaan jalatti ijaaramanii fi diinagdeedhaan akka gargaaraman waadaa seenaa jiraachuutu himame.Naota hedduufis maallaqni laatamuun bira gahameera.
Gama biroon caasaan OPDO Taayyee fi Milkeessaan hoogganamu kan Waggoota tokkoo ol lakkoofsise ijaarrametu jiran.Sunis akka dhaabbanni wayii qopheesse fakkeessuuf, ” justice for all” dhaabbata jedhamuun hootela Abbabechiti qopheeffamee, namoota isaniif amanaoodha jedhan,golee Oromiyaa guutuu keessaa walitti qaban.Walgahii kana irratti ABO abaaraanii akka ummatni jibbu shirri qindeeffame Jaartolii fi Qeerroon fashala’e.Guyyaan walgahii kun gaggeeffame mudde gaafa 8/2018 ture.Hiriirri deeggarsa OPDOs akka godhamu saganteeffamee harkatti fashalaa’e.Xalayaan hololaa magaalaa Ambootti bareeffame, akka waan qaama olii irraa dhufeetti qopheessuun hiramaa jiraachuunis saaxilameera.
Yeroo darbes Dr.Abiyyi magaalaa Amboo kan seenee barattoota dubbiseef tumsuma shira deemaa jiruuti.
Mudde guyyaa 29/3018kana hooteela Jaarraatti immoo Dammaqaan akkaataa ‘Shanee’ diigan kan jedhu fi namoota of jalatt ijaaruujabeessinijaarsaa namni tokko namoota 10 of jalatti akka ijaaruu dirqamni kennamee ture.Walgahiin mudde 29/2018 deebi’ee guyyoota torbee lama hin calletti akka walgahiin gaggeeffamutu waadaan galame.Maallaqni ittiin hojjetamus qoodameera.
Namni dirqama ABO diiguuf,Dammaqaa irraa fudhatee magaalaa Amboo keessatti hojjetaa jiru kan biroo ammoo barataa Yuuniversiitii Finfinnee waggaa 2ffaa kan ta’e Geetuu Daandessaa kan jedhamudha.Geetuun amma dura Waraana Wayyaanee keessaa ture.Isaa booda barnootatti deebi’ee amma yuuniversiitii gale. Bakki dhaloota isaa ganda 02 dha.Namni kun OPDO irraa maallaqa isaaf bahuun hojii basaasaa irra ture.Namoota quuqama qabanitti dhihaatuun sabboonumma akka qabu of fakkeessee hojii basaasummaa hojjeta.Qaama dhaabaas ABO ni quunnama.Namni magaalaa Amboo fi miseensonni ABO sabboonummaan malee hojii diinummaa isaa kana bira hin geenye.
Amma hojii isaa ifa baasee dhaaba irratti holola hoofuun,namoota kakaasaa jira.ABO balleessuuf namoota ijaaraa jira.Dammaqaa irraa qarshii qooddatee hojii diigumsaa fi shiraa hojjechaa jira.
Egaa waliigalatti shirri namootni kun qindeessaa jiran saaxilameera.miseensotnii fi deeggartootni akeekaa diinaa kana hubatuun akka irratti dammaqxanii fashalsitan siniif dhaamna.Dammaqaas ta’e warrii kaanis shira diinaa kana irraa akka dhaabbatan gadi jabeessinee hubachiisuu barbaanna.
Magaalaa Amboo irraa!!
Maaloo dhaggeeffadha waan gurbattii xawalwwaallee kun jettu.” Kan durayii warri ABO miseensonni fi deeggartoonni isaanii kan isaan liqimsanii fudhachuu qaban qabsoon bilisummaa oromoo injifannoo golabamee jira”.kana booda barbaachiisuman WBO hin jiru jette” Jawaar Mohammed har’a.jamaa bilisummaa isa kamtu argame? UUMMANNI KEENYA akkuma kaleessaa har’as qe’ee abbaa isaa irratti ajjeefamaa buqqifamaa,jumulaa mana hidhatti guuramaa jiraa.mee namittiin kun hiika bilisummaa dhuguma beetii amma yoo bilisummaa jechuun siif maal jechuudha jedhanii gaafatan.
“Dhiiga ilmaan Oromoo weyyaanee wajjin kan dhangalaase OPDO dha, kanaan booda nurraa ka’i sii gaheera yaa OPDO”
“Ammaan booda OPDO’n abbaa garaa nun bulchitu
OMN: Haala yeroo iratti turtii Dr. Mararaa Guddinaa Waliin (Amajjii 09, 2019)